Waxyaabahan taxanaha ah dhammaantood waxay wada isticmaali karaan Y-700, Y-701, Y-702 taxane PC fasal Is-beddelka wareejinta otomaatiga ah, marka laga reebo waxyaabaha NA, SA, LA.
2.Tilmaamaha xakamaynta ATS, fadlan eeg faahfaahinta "PC class Automatic Transfer switch switch".
YES1 taxanaha ATSE wuxuu kakooban yahay jirka isbadalka iyo xakamaynta wareejinta labadan qaybood. Wareejinta waxaa wada gariiradda korantada, sidaas darteed xawaaraha wareejinta ayaa aad u dhakhso badan. Awoodda koronto ee koontaroolaha waxay qaadataa awoodda ugu weyn ama awoodda degdegga ah ee AC220V sida danab shaqeynaya.
NA, SA, LA nooca ATSE waa nooc muhiim ah. Kontaroolaha ayaa lagu rakibay gudaha jirka. Isticmaaluhu wuxuu kaliya ubaahan yahay inuu ku xiro wareegga weyn markaa ATSE wuu shaqeyn karaa. Waxay ku habboon tahay isticmaalka isku xirka isticmaalaha. Dhanka kale, nooca SA ee ATSE oo leh aalad koronto dhaliyaha ku biirisa, gelinta dabka dadban, soocelinta dabka ee dadban, awoodda ugu weyn iyo tilmaame xiritaanka awoodda degdegga ah.
N, C, M, Q, S, L waa nooc nooc ah. Kontaroolaha ayaa lagu kala saaraa jirka beddelka. Isticmaaluhu waa inuu ku xiraa kantaroolaha jirka jirka fiilooyin.
Nooca 'ATSE' oo isku dhafan iyo kala-jaban oo labadaba leh koronto, ka hooseeya korantada, wajiga caadiga ah iwm qaladka ogaanshaha cilladda iyo sidoo kale koronto-dhaliyaha oo bilaabaya iyo joojinta shaqada soo-saarka calaamadda (Marka cilladda ugu weyn ee korantada, calaamadda la soo diro ka dib dib-u-dhaca waqtiga 3s. , Calaamadda ayaa la joojin doonaa ka dib 3s waqtiga dib u dhaca).
NA Nooca Wareejinta otomaatiga ah ee loo beddelo laba jago iyo nooca isku dhafan
N Nooca Wareejinta otomaatiga ah Beddel Laba Mawqif iyo Nooca Kala-baxa
NA / N / C Nooca Kala Wareejinta otomaatiga ah Beddel Laba Mawqif
M Nooca Wareejinta otomaatiga ah Beddel Laba Mawqif
Q Nooca Kala Wareejinta otomaatiga ah Beddel Laba Mawqif iyo Nooca Kala-baxa
SA / S / LA / L Nooca Kala Wareejinta Tooska ah Beddel Saddex Meelood
G Nooca Wareejinta otomaatiga ah Beddel Saddex Meelood
ATS (PC ATS maamusha)
PC Class ATS maamusha
Taxanaha YEQ1 Wareejinta Wareejinta otomaatiga ah, wuxuu ka kooban yahay 2PCs 3P ama 4P mashiinka wareegga mini, farsamooyinka gudbinta silsiladda farsamada, xakamaynta, iwm, muuqaalka wuxuu noqon doonaa sidan soo socota:
1.Qadar yar, dastuurka ku fudud; waxaa jira bixin 3P, 4P. hawl fudud iyo muddo dheer in la isticmaalo.
Wareejinta wareejinta wadista gawaarida hal mishiin ah, siman, buuq la'aan, saameyntu way yar tahay.
3.With xiranka farsamada iyo isdhaafsiga korantada, isbedelka kalsoonida, waxaa lagu keeni karaa gacanta ama hawlgalka otomaatiga ah.
4.Ha wareegga gaaban, ilaalinta xad-dhaafka ah sidoo kale korantada, korantada, hawsha wejiga luminta iyo sidoo kale shaqada digniinta caqliga leh.
Xuduudaha isweydaarsiga otomaatigga ah waxay si xor ah u noqon karaan banaanka.
6.With interface shabakadda kumbuyuutarka ee kontoroolka fog, hagaajinta fog iyo isgaarsiinta fog, dareenka fog iyo afar shaqo oo kale oo xakameyn ah iyo wixii la mid ah.
1. Heerkulka hawada ee -5 ℃ ilaa + 40 ℃, iyo celceliska 24 saac heerkulka kama badnaan + 35 ℃.
Goobta rakibidda oo aan ka badnayn 2000 mitir.
Heerkulka ugu sareeya ee + 40 ， ， qoyaanka qaraabada ah ee hawadu kama badna 50%, heerkulka hoose waa loo ogolaan karaa inuu yeesho qoyaan qaraabo badan, sida 20 ℃ at 90%. tallaabooyin gaar ah waa in loo qaadaa uumiga mar mar sababo la xiriira isbeddelka heerkulka.
4.Xafdiga: Fasalka Ⅲ
5.Qofka rakibaadda: Ⅲ.
6.Labada xadhig ee korontadu waxay kuxiranyihiin dhinaca kore ee badhanka, iyo xariiqda xamuulka waxay kuxirantahay dhinaca hoose.
7. Goobta rakibidda waa inaysan yeelan gariir weyn, saameyn.
X / Y Nooca Beddelka Tooska ah
N Nooca Beddelka otomaatiga ah
M / M1 Nooca Wareejinta Wareejinta otomaatiga ah
ATS (Maamulaha CB)
CB Class ATS maamusha
Taxane YEM3 kiiska moodaa wareegga wareegga (hadda kadib loo gudbiyo wareejiye) waxaa lagu dabaqayaa wareegga AC 50/60 HZ, danabkiisa go'doomin lagu qiimeeyay waa 800V, danab shaqeynaya ayaa lagu qiimeeyaa waa 415V, shaqadeeda la qiimeeyay ee hadda socota waxay gaareysaa 800A, waxaa loo isticmaalaa Ku wareeji bilowga gawaarida si aan caadi aheyn oo aan caadi aheyn (Inm≤400A). Baabiraha wareegga wuxuu leeyahay culeys xad dhaaf ah, wareeg gaaban iyo shaqeyn difaac ka hooseysa danab taas oo ka ilaalinaysa wareegga iyo qalabka korontada in la waxyeeleeyo. Qalabka wareegga wareegga wuxuu leeyahay astaamaha mugga yar, awood jabin sare, qaanso gaaban iyo gariirka kahortaga.
Qalabka wareegga waxaa lagu rakibi karaa si qumman ama qotoma.
1.Dhererka: <= 2000m.
2. Heerkulka deegaanka: -5 ℃ ~ + 40 ℃.
Qoyaanka qoyaanka ah ee hawadu kama badna 50% heerkulka ugu sarreeya ee + 40 ℃, qoyaan badan oo qaraabo ah ayaa loo oggolaan karaa heerkulka hoose, tusaale ahaan 90% at 20 measure .Qaab gaar ah ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto haddii ay dhacdo uumiga mararka qaarkood kala duwanaanta heerkulka.
4 Shahaadada Sharciga 3.
Qeybta 5: Ku rakibida: loogu talagalay wareegga weyn, ee loogu talagalay wareegyada kale ee kaabayaasha iyo xakameynta.
6. Qalabka wareejiya wuxuu ku habboon yahay jawiga elektromagnetic A.
7. Waa inaanay jirin wax qarxa oo khatar ah oo aanu jirin habaas wax qabata, waa inaanu jirin wax gaas ah oo birta qudh-gooya oo dumiya dahaarka.
8. Meeshu kuma diideyn roob iyo baraf.
9.Xaalada kaydinta: heerkulka hawadu waa -40 ℃ ~ + 70 ℃.
YEW1 taxanaha Qalabka Wareegga Hawada (oo hadda kadib loo yaqaan 'circuit breaker') ayaa lagu dabaqayaa shabakad qaybinta AC 50HZ, danab lagu qiimeeyay 690V (ama ka hooseeya), laguna qiimeeyay hadda 200A-6300A.
YECPS inta badan waxaa loo isticmaalaa nidaamka korantada korontada oo leh AC 50HZ, 0.2A ~ 125A ——waxaa lagu qiimeeyay danab 400V, waxaa lagu qiimeeyay danab dahaadh heerkiisu yahay 690V.
YEM3D-250 DC wareejiyeyaasha wareegga waxaa inta badan loo adeegsadaa nidaamyada DC iyadoo lagu qiimeeyo danab dahaadh ah 1600V, danab shaqo oo lagu qiimeeyo DC 1500V iyo ka hooseeya, ka badan culeys iyo gaagaaban gaagaaban oo cadow ilaalinaya qaybinta korantada iyo khadadka ilaalinta iyo qalabka bixinta qalabka ee nidaamyada DC ee leh qiimeynta hadda 250A iyo wixii ka hooseeya.
Khariidadaha wareegga yar-yar YEB1—63 Hare loogu talagalay in lagu bixiyo ilo koronto oo otomaatig ah oo ka go'an koronto saa'id ah.Waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo qaybaha kooxda (dabaqyada iyo dabaqa) iyo guddiyada qaybinta ee dhismooyinka, guryaha, dadweynaha iyo maamulka. 64 shay halkii 8 ee la qiimeeyay oo udhaxeeya 3 ilaa 63A MCB-kan waxaa la helay shahaadada ASTA, SEMKO, CB, CE
Wareegtada taxanaha xamuulka-go'doominta ee 'YGL' ayaa lagu dabaqayaa wareegga AC 50 HZ, danab lagu qiimeeyay 400V ama ka hooseeya, oo hadda lagu qiimeeyay Max 16A ~ 3150A.Waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro oo lagu jebiyo wareegga iyada oo aan si joogto ah loo hawlgalin. leh 690V waxaa loo isticmaalaa oo keliya go'doomin koronto.
1.Dhererka aan ka badnayn 2000m.
Heerka heerkulka cimilada waa 5 ℃ ilaa 40 ℃.
Qoyaanka qoyan ee aan ka badnayn 95%.
Deegaanka oo aan lahayn wax qarxa.
5.Beesha aan roob iyo baraf toona weerarin.
Fiiro gaar ah: Haddii sheyga la filayo in loo isticmaalo deegaanka heerkulkiisu ka sarreeyo + 40 ℃ ama ka hooseeyo -5 ℃ ilaa 40 ℃, adeegsiga ayaa u sheegi doona soo-saarka.